Otu esi ebelata ọnụ ahịa ndị ahịa gị maka oke ROI | Martech Zone
Mgbe ị ka na-amalite azụmahịa, ọ na-anwa ịdọta ndị ahịa site n'ụzọ ọ bụla ị nwere ike, n'agbanyeghị ọnụ ahịa, oge, ma ọ bụ ike ọ gụnyere. Agbanyeghị, ka ị na-amụta ma na-etolite, ị ga-achọpụta na ịhazigharị ọnụ ahịa ndị ahịa na ROI n'ozuzu ya dị mkpa. Iji mee nke ahụ, ị ​​ga-achọ ịma ọnụ ahịa nnweta ndị ahịa gị (CAC).
Otu esi agbakọ ọnụ ahịa nnweta ndị ahịa
Iji gbakọọ CAC, naanị ihe ị ga-achọ bụ kewaa ọnụ ahịa ahịa na ọnụ ahịa ahịa niile metụtara ị nweta onye ahịa ọhụrụ n'ime oge a kapịrị ọnụ. Ọ bụrụ na ị maghị, anyị ga-agafe Usoro CAC Ebe a:
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụrụ na Karl ji $10 zụta ihe nkwụnye lemonade ya wee nweta mmadụ iri zụta ngwaahịa ya n'otu izu, ego ọ ga-enweta maka izu ahụ ga-abụ $1.00.
Kedu ihe bụ ọnụ ahịa nnweta ndị ahịa gị?
Nke ahụ bụ ọmarịcha ihe atụ dị n'elu. N'ezie n'ime ụlọ ọrụ ọkwa ụlọ ọrụ, CAC dị mgbagwoju anya karị:
Mgbakọta ahịa - nke a kwesịrị ịgụnye ndị ọrụ ahịa gị, ụlọ ọrụ gị, ihe onwunwe gị, ikikere ngwanrọ gị, yana mgbasa ozi ma ọ bụ nkwado ọ bụla ị na-etinye n'ime iji nweta ọhụrụ onye ahịa.
Mkpokọta mmefu ọrịre - nke a kwesịrị ịgụnye ndị ọrụ ahịa gị, ọrụ ha na mmefu ha.
Ihe mgbagwoju anya ọzọ na-atụle oge gị nke ọma nke enwetara ndị ahịa. Ọnụ ahịa ahịa na ọnụ ahịa ahịa taa anaghị ebute onye ahịa nwetara ozugbo. Ị ga mkpa atụmatụ gị nkezi ịzụrụ njem… ebe a nwere ahịa na-amata ngwaahịa gị site na ebe ha na-n'ezie tọghatara. Ọtụtụ mgbe, nke a nwere ike ịbụ ọnwa ma ọ bụ ọbụna afọ dabere na ụlọ ọrụ, usoro mmefu ego, na mkparita uka.
Nke a bụ ya mere o ji dị mkpa ka ị tinye usoro nbata nke na-akọwapụta nke ọma ka ndị atụmanya nụrụ gbasara gị, mgbe ha na gị na-akpakọrịta, ruo n'ụbọchị ntughari ha n'ezie.
Otu esi ebelata ọnụ ahịa ndị ahịa gị
Ozugbo ịmara otu esi agbakọ CAC gị, ị ga-achọ iwetu ya ka ị na-ahụ uru ahụike sitere n'aka onye ahịa ọ bụla. Ihe ọzọ ị ga-achọ ime bụ jigide ndị ahịa dị adị - nnweta ndị ahịa nwere ike na-eri ihe ruru okpukpu asaa karịa ịre ndị ahịa dị ugbu a, ka emechara!
Maka ndụmọdụ ndị ọzọ maka ịkwalite ọnụ ahịa ndị ahịa gị, GetVoIP's infographic n'okpuru na-egosi atụmatụ ise ọhụrụ. Dịka ọmụmaatụ, ịmepụta ọdịnaya na-etinye aka na nke bara uru nwere ike inyere gị aka ịmepụta njikọ n'etiti ndị ahịa na-eme ka ha ruo ebe ịzụrụ ngwa ngwa. Tinye na ụfọdụ CTA na-egbu egbu ma ị nwere ike ịhụ ndị ahịa na-azụta na ọdịnaya mbụ ha na-eri!
Ị nwekwara ike iji akpaaka ahịa maka uru gị. Dịka ọmụmaatụ, ndị debanyere aha Birchbox na-anata ozi-e nnabata na-esochi ọtụtụ ozi ịntanetị na ndụmọdụ ịma mma na aghụghọ etemeete. Ọtụtụ n'ime ndị a emebeghị ịzụrụ ihe, mana ụlọ ọrụ ahụ na-enye ọtụtụ uru efu n'ihu. Ị nwekwara ike iji chatbots, ozi ịntanetị ahaziri onwe ya na mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze iji kwalite arụmọrụ.
Ị nwere ike ịhụ ndụmọdụ ndị a na ndị ọzọ n'okpuru. Site n'ịmara na imeziwanye CAC gị, ị ga-enwe ike ịhụ nlọghachi ọzọ na ntinye ego, na nke ahụ bụ ihe dị mma ịhụ!
Tags: ego nnwetaMgbakwunye marketingMgbakwunye mmemmebirchboxcakusoro cacgbakọọ caccontent Marketingntụgharị mgbanwe njikarịchaeri kwa nnwetacroahịa nnwetausoro ego inweta ndị ahịanjigide ndị ahịausoronwetaotu esi agbakọ cacmelite ọnụego mgbanwekwalite croakụrụngwa ahịammefu ahịaọnụ ọgụgụ nke ndị ahịa nwetararetargetingmmefu ahịa